Kiisaskaas awgood waan shakhsiyeyn karnaa oo ilaalin karnaa AirPodskeena Wararka IPhone
Bilooyin badan oo dib u dhac ah ka dib, Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay jiilka labaad ee AirPods, jiil labaad oo u taagan in lagu maareeyo H1 chip oo noo ogolaanaya u yeer Siri adigoon taaban AirPods iyo bixinta nidaamka lacag la'aanta ah ee lacag la'aanta ah ee nooca ugu qaalisan.
Tan iyo markii ay Apple soo saartay jiilkii ugu horreeyay ee AirPods, waxaa jiray soo saarayaal badan, gaar ahaan Aasiya, kuwaas oo Waxay bixiyaan dabool si loo ilaaliyo sanduuqa weelka ee AirPods-keena. Sanduuqa 'AirPods' si sax ah uma adkeysana oo wuxuu si dhaqso leh u muujiya astaamo adeegsi haddii aanaan adeegsan kiis.
Ragga ka socda Cupertino waxay ku daabaceen websaydhka Kuuriya xayeysiin cusub oo loogu talagalay AirPods halkaas oo ay na tusayaan daboollo kala duwan oo kala duwan si loo shakhsiyeeyo loona ilaaliyo sanduuqa AirPods-keena. Dhammaantood waxay ka yimaadeen adeegsadayaasha waddankan yaa shaqsiyeeyay sanduuqyada AirPod-kooda ku darista istiikarada, qalbiyada, daboolida waxyaabaha la isku qurxiyo iyo surwaalka, istiikarada leh xarfaha milix iyo basbaas ... iyo waliba ku darida habab kala duwan oo loogu xidho surwaalka ama furayaasha guriga.
Apple ma bixiso mid ka mid ah kiisaskan ama ikhtiyaarrada qaabeynta ee AirPods ee Kuuriya ama waddan kale oo adduunka ah oo ay shirkaddu ku leedahay joogitaan. Waxaad kaliya kor u qaadeysaa hal-abuurka macaamiishaada Kuuriya iyo si kadis ah ku dhiirrigelinta inta kale ee isticmaala adduunka.
Samsung Galaxy Buds ayaa bixiya tayo wanaagsan
Sida la sheegay Warbixinta Macaamiisha, tayada iyo faa'iidooyinka ay bixiyaan jiilka labaad ee AirPods, kuu oggolaan maayo inaad hesho shahaado ahaan shey lagu taliyay nafleydan, dhabar jab adag ayey ku tahay Apple, maaddaama nafleydan ay tixraac ka tahay Mareykanka xilligii la raadinayey wax soo saar, oo badanaa elektiroonig ah.
Samsung's Galaxy Buds, haa way ku guulaysteen shahaadadan, maahan oo kaliya mahadsanid xaqiiqda ah inay ka jaban yihiin, laakiin sidoo kale waxaa mahad leh tayada sare ee ay na siiso iyo iswaafajinta ay ku bixiso macruufka, kana weyn waxa aan ka heli karno AirPods-ka ku jira Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Kiisaskaas awgood waan shakhsiyeyn karnaa oo ilaalin karnaa AirPods-keena
Habka, fiidiyowga, sida loo sameeyo dahab AirPods oo ay fuliso dahable xirfadle ah